အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များအား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁) | Lumyo Chit
ဒီမိုကရေစီကို အသွင် ကူးပြောင်း နေသည် ဟု ကြွေးကြော် ဖေါ် ဆောင် နေသော ဦး သိန်း စိန် အစိုးရ လက် ထက် တွင် တိုင်း ရင်း သားပြည်နယ် များ၌ စစ်မှ န်သည့် ပြည် တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးရရန် အလား အလာ မတွေ့ ရသေး။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲ မဖြစ် ပွားသည့် မြေပြန့် ဒေသ များမှာပင် အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များတိုး များလာ၊ နိုင်ငံ ပြင်ပ မှ လည်း ဟိုကသည်က ခြိမ်းခြောက် မှု များပေါ်လာ လျှက်ရှိနေ ကြောင်းတွေ့ ရသည်။ တိုင်းပြည် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များကို ထိတ်လန့်ရ၊ ဘာ သာရေး အစွန်း ရောက်များကို ကြောက်ရ၊ အကြမ်းဘက် သမား များ၏ အန္တရာယ်ကို သတိထား နေရနှင့် တိုင်းပြည်၏ ဒေသ အမြောက် အများ၌ သာမန် လူထု ပေါင်းမြောက် များစွာမှာ ယုံသူငယ်များ ဘ၀ သို့ ကျဆင်း နေရသည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး သည် ပြိုကျ တော့ မည်လားဟု စိုးရိမ်ရ သည် အထိပင် ယိုင်လဲ ချိနဲ့ လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်း၊ တည်ငြိမ်ကာ အခြေခံ လူထု စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ရနိုင်ရေး အတွက် “စစ်မှန် သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံများ” ကို တည်ဆောက် ရန်မှာ အရေး တကြီး လိုအပ်ချက် ဖြစ် လာသည်။
“စစ်မှန်သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံများ” ဟူသော စကားလုံးကို သုံးစွဲ ရခြင်းမှာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတု လွှမ်းမိုး သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ အဆက် ဆက်သည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို စကားလုံး အရ သုံးစွဲခဲ့ သော်လည်း ယင်းမှာ မည်သို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိ ကြောင်းကို မည်သည့် အခါ ကမျှ လူထုကို ရှင်းပြ ခဲ့ ခြင်းမရှိ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၏ နိုင်ငံ တော် အခြေခံ မူများ ဟူသော ကဏ္ဍ တွင်မူ ဥပဒေ စိုး မိုးရေး ကို စကားလုံး အရ ပင် ထည့်သွင်း မထားတော့။ အကြောင်း မှာ ယင်း၏ အနှစ် သာရ များကို တိုင်းပြည်၏ အချုပ် အခြာ ဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ကျင့်သုံး လိုခြင်း မရှိသော ကြောင့် သာ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူ ရပါ တော့မည်။
ချုပ်ပြော ရလျှင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ “စစ်မှန်သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံများ” အား လူထု တရပ်လုံး စနစ် တကျ လေ့လာ ခွင့် မရ သေးပါ။ စစ်အစိုးရ အဆက် ဆက်က ယနေ့ အချိန် အထိ ကျင့်သုံး နေသော ဥ ပဒေ စိုး မိုးရေး ဟူသည်မှာ နိုင်ငံတကာ စံထားချက် များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး Rule of Law မဟုတ်။ အာဏာပိုင် များက ပြဌာန်း ထားသည့် ပြည်တွင်း ဥပဒေ များအတိုင်း စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law အဆင့် တွင်သာ ရှိနေသေး ကြောင်းတွေ့ ရသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် တွင် ပြဌာန်း၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ် တွင် ပြင်ဆင်ကာ ယနေ့ တိုင် အတည်ပြု ကျင့်သုံး လျှက်ရှိသော တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၅) တွင်အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရှိ ရ သည်။
“တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသည် အခွင့် အာဏာ များအား ဥပဒေနှင့် အညီ ကျင့်သုံးသည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အောက်တွင် ဆိုရှယ်လစ် နိုင်ငံကို တည်ဆောက် သည်။” ယင်းပြဌာန်း ချက်ကို လေ့လာ လျှင် တရုတ် နိုင်ငံသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ကျင့်သုံး နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းမှာ မည်ကဲ့ သို့သော ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါ သနည်း။
“တရုတ် နိုင်ငံသည် Rule by Law နှင့် Rule of Law ကို ပေါင်းစပ် ကျင့်သုံး နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊” ဆွီဒင် နိုင်ငံ စတော့ ဟုမ်းမြို့၊ စတော့ ဟုမ်း တက္ကသိုလ် ဥပဒေ ပညာ ဌာနတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ (၈) ရက်နေ့က ကျင်းပ ခဲ့သည့် နီးနှော ဖလှယ် ပွဲ၌ တရုတ် နိုင်ငံ ပီကင်း တက္ကသိုလ် ဥပဒေ ပညာ ဌာနမှ ပါမောက္ခ Dr. Gong Renren က ပြောကြား သွား ခဲ့ သည်။ ၄င်း၏ အဆို အရ တရုတ် နိုင်ငံသည် နိုင်ငံ တကာ စံထားချက် များနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အဆင့်ကို မသွားနိုင် သေးကြောင်း သုံးသပ် နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤမျှ ပေါင်းစပ် ကျင့်သုံးခြင်း သည်ပင် တရုတ် နိုင်ငံ အတွက် များစွာ အကျိုး ရှိကြောင်း ထင်ရှား သည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံတွင် ယနေ့ တရုတ် နိုင်ငံ သည် စည်းလုံး ညီညွတ် မှုတည် ဆောက်နိုင် ရုံသာမက နိုးနေ သော နဂါးကြီး အဖြစ် စီးပွားရေး အရ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး လာ လျှက် ရှိသည်။
Rule of Law နှင့် Rule by Law စကားလုံး နှစ်လုံး၏ ဆက်စပ်မှုနှင့် ကွာခြားမှုကို လေ့လာ မိပါက “ဥပဒေ စိုးမိုးရေး” ဟူသော စကားလုံးကို လွယ်လင့် တကူ သုံးစွဲ၍ မရ နိုင်ကြောင်း ထင်ရှား ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် နိုင်ငံ တကာ စံထားချက် များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဟူသည်ကို လူထုကြီး တရပ် လုံး လေ့ လာကာ တတ်နိုင် သမျှ လက်တွေ့ ဖေါ် ဆောင်သင့် သော အချိန် ရောက်ပါပြီ။ စစ်အာ ဏာရှင် များ တည်ဆောက် ထားသည့် ဥပဒေဘောင် နှင့် ၄င်းတို့ စိတ် ကြိုက် ပြဌာန်း ထားသည့် ဥပဒေများ အတိုင်း စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law တို့အား တိုက်ဖျက် သင့်သော အချိန်သို့ ရောက်ပါပြီ။
ဤစာတမ်း ငယ်တွင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အကျယ် တ၀င့် ရှင်းလင်းပြ မည်တော့ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် မျက်မှောက် ဖြစ်ပွား နေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များအား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ရှုဒေါင့်မှ ထောက်ပြ သုံးသပ် ပါမည်။ ထို့နောက် ယင်းတို့အား စနစ်တကျ ဖြေရှင်းကာ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ လူထုကြီး တရပ် လုံး ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တရား မျှတမှုနှင့် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ ရနိုင် ရေး အတွက် နိုင်ငံ တကာ စံထားချက် လမ်းကြောင်းတွင် မြန်မာ နိုင်ငံ အနေဖြင့် ကျင့်သုံးနိုင် ရေးအတွက် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အကျဆုံး အဆို ပြုချက် အချို့ ကို တင်သွင်း ဆွေးနွေး သွားပါမည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံကို မတည် ဆောက်နိုင်ခြင်း။
မည်သည့် နိုင်ငံတွင် မဆို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသည် ဥပဒေ အားလုံး၏ အချုပ် အခြာ ဖြစ်သည်။ ယင်း ၏ သဘောမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် မညီသော တည်ဆဲ ဥပဒေမှန် သမျှကို ဖျက်သိမ်း ပစ်ရ သည်။ နောင်ပြဌာန်းမည့် ဥပဒေများ သည်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ နှင့် ကိုက်ညီ ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံကို တည်ဆောက် လိုပါက ဥပဒေ အားလုံး၏ အချုပ် အခြာ ဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ယင်း၏ အုတ်မြစ်ကို ချမှတ် ရပါမည်။
ဥပဒေ စိုးမိုးရေး၏ အခြေခံ အကျ ဆုံးမူမှာ ပြစ်မှုကျူး လွန်သူ ကိုအပြစ် ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း ဥပဒေ ရှေ့မှောက် တွင် တန်းတူ ခံစားခွင့် ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ဤမူကို အခြေခံ အားဖြင့် ဥပဒေနှင့် နီးစပ် သူ တိုင်း သိကြပါသည်။ အသစ် အဆန်း မဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် ကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခဲ့စဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း (ယခု ဦးရွှေမန်း) ကိုယ်တိုင်ပင် တိုင်းသိ ပြည်သိ ကြွေးကြော် ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး၏ အသစ် အဆန်း မဟုတ်သည့် ဤမူ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မည်သို့ လက်တွေ့ ကျင့်သုံး အကောင် အထည် ဖေါ်သင့်သည်၊ မည်သည် တို့မှာ အဟန့် အတား ဖြစ်နေသည်၊ ဤမူ ကို ဖေါ်ဆောင် နိုင်ရေး အတွက် မည်သည့် ဥပဒေ များကို ဖျက်သိမ်း၊ ပြင်ဆင်၊ အသစ် ပြဌာန်း သင့် သည်၊ ဟူသည် တို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အလေး ထားကာ ယခု လွှတ် တော် ဥက္ကဌ နေရာတွင် ယူထားသော ဦးရွှေမန်း သည် လွှတ်တော် အတွင်း၌ မည်သည့် အခါ ကမျှ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးခဲ့ သည်ကို မကြား သိရပါ။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဦးဆောင်ရန် ဆိုသည်မှာ ဝေလာ ဝေးပင်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ ၄၄၅ အပေါ် သုံးသပ်ချက်
ပြစ်မှုကျူး လွန်သူကို အပြစ် ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း ဥပဒေ ရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူ ခံစားခွင့် ရှိရမည် ဟူသည့် မူကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေက အာမခံ ရပါ မည်။ မဆန့်ကျင် စေရပါ။ သို့ရာတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှစ၍ အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ် ခဲ့သည့် သက်တမ်း ကာလ အတွင်း ဖြစ်ပွား ကျူးလွန် ခဲ့သည့် ပြစ်မှု များနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ စစ်အာဏာ ရှင်တို့၏ တာဝန်ရှိ မှုကို ဖုံးကွယ်ကာ “မည်သည့် တရားရုံး တွင်မျှ တရားစွဲ ဆိုခွင့် မရှိစေရ” ဟူသည်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ တွင် ပြဌာန်းထား သည်။ ယင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးထား ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြဌာန်း ချက်မျိုးကို ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် တည်ဆဲ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ များ၌ မည်သည့် နိုင်ငံ တွင်မျှ မတွေ့ ရပါ။ ယင်း အပေါ် ဥပဒေ အထောက် အကူပြု ကွန်ယက်မှ ဆွေးနွေး မှုအား ၂၀၁၃ မေလ (၇) ရက်နေ့တွင် ဘီဘီစီမှ အသံ လွှင့်သွား သည်ကို ဤလင့်ခ် တွင် နားဆင်ပါ။
ပုဒ်မ ၄၄၅ ပြဌာန်း ချက်သည် လူတိုင်း ဥပဒေ ရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူရေး ဟူသည့် အခြေခံ မူကို အဆင့် နှစ်ဆင့် အရ ဆန့်ကျင် လျှက်ရှိသည်။ ပထမ အဆင့်မှာ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင် ဟောင်းများ သည်သာ အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ရနေ ကြသည်။ အခြား သာမန် ပြည်သူများ မခံ စားရပါ။ ဒုတိယ အဆင့် မှာ ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူခြင်း တူပါက န၀တ၊ နအဖ စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် များသာ လွတ်ငြိမ်း ခွင့်ကို ခံစား ကြရသည်။ ၄င်းတို့၏ အမိန့် ပေးမှု အရ သက်ဆိုင်ရာ မှုခင်းများ ၌ မြေပြင်တွင် ကြီးကြပ် ကွပ် ကဲ ဖေါ် ဆောင် ခဲ့ ကြသည့် အခြားစစ် ခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင် များမှာ အဆိုပါ အခွင့် အရေး ကို ခံစားခွင့် မရကြပါ။ အချိန်မရွေး တရားစွဲ ခံရ နိုင်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ သည် ခွဲခြားမှု ကို အခြေ ခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ကျင့်သုံးထား ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူအား လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အုတ်မြစ် တချပ် ဖြစ်နေ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြစ်မှုကျူး လွန်သူ မည်သူ့ကို မဆို တိတိ ကျကျ စုံစမ်း ရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်ကာ အရေးယူ အပြစ် ပေးခြင်း ဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး တည် ဆောက် ရမည် ဟူသော အသံကို လူ့အဖွဲ့ အစည်း၌ ကျယ်လောင် စွာ မကြားရ တော့ပါ။ အကျိုး ဆက် အနေဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက်သည့် အခြေ အနေကို တပြည်လုံး၌ ကြုံတွေ့ နေကြ ရသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ သည် တိုင်းပြည်တွင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် ပန်းခင်းသော လမ်းကို မတည် ဆောက်နိုင်ပါ။ ပြောင်းပြန်ပင် ၄င်းသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆက် လက် ပျက်သုဉ်း စေရန် ငရဲ မီး ခင်းသော လမ်းကို ဖေါက်ပေး ထားကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်။
ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက်စီး စေခဲ့ရာ၌ မည်သူ့တွင် အမြင့်ဆုံး တာဝန် ရှိသလဲ။
ရခိုင် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ၏ အစီရင် ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၇ တွင် “နစက သည် ကက (ကြည်း) ၏ တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိနေ ကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ အစည်း များသည် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး ဌာန များ၏ အမိန့် ကိုသာ နာခံရပြီး ဒေသ ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး ဆောင်ရွက် သူများ၏ အမိန့်ကို နာခံ နိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ရ ကြောင်း” အတိ အလင်း ဖေါ်ပြထား သည်။ ကက (ကြည်း) သည် (ကာ/လုံ) ၏ အဖွဲ့ ၀င်များ ဖြစ်သော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တို့၏ တိုက်ရိုက် အမိန့် ပေးညွှန်ကြား မှုအောက် တွင် ရှိသည်။
ရခိုင် ပဋိပက္ခ များအတွင်း (ကာ/လုံ) က ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံကို ရိုက်ချိုး ခဲ့သည့် အဓိက ဖြစ်ရပ် ကြီးနှစ်ခု ရှိခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏ အစီရင် ခံစာအရ ပေါ်လွင်သည်။ ၄င်းတို့မှာ ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့တွင် တောင်ကုတ်၌ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဆယ်ဦး အသတ်ခံ ရခြင်းနှင့် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ တွင် မောင်းတော၌ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များက ရခိုင် လူထုများ အပေါ် ပြန်လည်၍ အကြမ်း ဘက် မှုများ ပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဆယ်ဦး အသတ် ခံရခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူများကို ယခု အချိန် အထိ ဖေါ် ထုတ် အရေး ယူခြင်း မပြုပါ။ ထိုနည်းတူ မောင်းတောတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များ ၏ ပြန်လည် အကြမ်း ဘက်မှုကို တားဆီး နိုင်ပါ လျှက် အာဏာပိုင် များက ကာကွယ် တားဆီးမှု မပြုခဲ့ပါ။ ယင်းနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၂ တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြ ထားသည်။
“မောင်းတော ဖြစ်စဉ်တွင် ထိုစဉ်က နစက အကြီး အကဲ လုပ်သူက ပြတ်သားစွာ ကိုင်တွယ် အရေး ယူ ဆောင်ရွက် ခဲ့မည် ဆိုပါက ယခု ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခ များစွာ ဖြစ်ပေါ် လာမည် မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင် ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များမှ ဝေဘန် သုံးသပ် ခဲ့ကြ ပါသည်။”
ပထမ ဖြစ်ရပ်တွင် ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူကို အရေး မယူ သဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ များနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် အမြောက် အများ ယခု အချိန် အထိ အကြိတ် အခဲ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ဖြစ်ရပ်တွင် ကာကွယ် တားဆီး နိုင်ပါလျှက် မကာ ကွယ်ခဲ့ သဖြင့် ထိခိုက် ဆုံးရှုံး မှုများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ရသည့် အပြင် ရခိုင် ပြည်နယ် အခြား ဒေသ များသို့ ပျံ့သွားခဲ့ သောကြောင့် ရခိ်ုင် လူထု များက မကြေ မနပ် ဖြစ်နေ ဆဲဖြစ်သည်။
၄င်းအကြိတ် အခဲများ၊ မကြေနပ်မှု များသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက်သုဉ်း ခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ အကျိုးဆက် အနေဖြင့် ပဋိပက္ခများ ဆက်လက် ကြီးထွား သွားခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။
ကော်မရှင်၏ အစီရင် ခံစာအရ ပေါ်လွင်သော ဖြစ်ရပ် နှစ် ခုလုံး တွင် သာမက ပထမဆုံး စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ကျောက်နီမော် လူသတ် မုဒိန်းမှုတွင် အမှန် တရားကို ဖုံးကွယ် ခဲ့သည့် အတွက် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက်သုဉ်း ရာတွင် အဓိက တာဝန် ရှိသူမှာ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် ဗဟို အစိုးရ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များသည် ၄င်းတို့၏ တိုက်ရိုက် အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားမှု အောက်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ရ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို မတည်ဆောက် ခဲ့သဖြင့် အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များ သည် မြန်မာ နိုင်ငံ အခြား နေရာ အတော် များများသို့ ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ တကာက လူ့အခွင့် အရေး ရှုဒေါင့်မှ စွပ်စွဲ လာမှုကို ကော်မရှင်က ပယ်ချသည် ဟူသည့် အပေါ် သုံးသပ်ချက်
နိုင်ငံ တကာက လူ့အခွင့် အရေး ရှုဒေါင့်မှ စွပ်စွဲ လာမှုကို ပယ်ချကြောင်း ကော်မရှင် အဖွဲ့ ဝင် ဒေါက် တာ ဒေါ် ရင်ရင်နွယ် က ပြောခဲ့သည်။ ပယ်ချ ရသည့် အဓိက အကြောင်းမှာ နိုင်ငံ တကာ သည် ဘင်္ဂါလီ တဘက်တည်း ကိုသာ မေးခဲ့ပြီး ရခိုင် လူမျိုးများ ဘက်ကို မမေးခဲ့ သောကြောင့် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် အခြား သူတချို့ ကလည်း အလားတူ တုန့်ပြန်ခဲ့ ဘူးသည်။ စင်စစ် အားဖြင့်မူ နိုင်ငံ တကာသည် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များဘက် ကိုလည်း မေးသင့် သလောက် မေးမြန်း ခဲ့သည်။ အရင်းခံ အားဖြင့်မူ ဘက်နှစ်ဘက် ရှုဒေါင့်မှ အဓိက ချဉ်းကပ်ရန် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အတွင်း၌ မည်သို့သော အခြေ အနေများ ဖြစ်ပွား သောအခါ နိုင်ငံ တကာက လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက်မှု ရှုဒေါင့်မှ ချဉ်းကပ် ကိုင် တွယ် သည်ကို ကော်မရှင် အနေဖြင့် လေ့လာ သင့်သည်။ ရိုးရိုး ပြစ်မှု နှင့် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက်မှု တို့၏ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကွာခြားမှု အပေါ် လည်း ရှင်းလင်းစွာ နားလည် ရန်လို ပါသည်။
သာဓက ဆိုပါမည်။ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အတွင်း၌ ဘာသာရေး အရ ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေး အရ ဖြစ်စေ၊ အခြား အကြောင်း တခုခု အရ ဖြစ်စေ လူတဦးက အခြား တဦးကို၊ လူအုပ်စု တခုက အခြား အုပ်စု တခုကို၊ သတ်ဖြတ် မှု ကျူးလွန်သည် ဆိုကြပါစို့။
လူ့အခွင့် အရေး ရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင် သတ်ဖြတ် ခံရသူ၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်ပိုင် ခွင့် ရုပ်သိမ်း ခံလိုက် ရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သာမန် အားဖြင့် နိုင်ငံ တကာက ၀င်ရောက် စွက်ဘက် ပြောဆိုမည် မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ အချုပ် အခြာ အာဏာ အတွင်း ကျရောက် နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄င်းနိုင်ငံ၏ အစိုးရ ကသာလျှင် အဆိုပါ နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေ များနှင့် အညီ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန် သူများကို အရေးယူ အပြစ် ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အာသံ ပြည်နယ် အနောက် ခြမ်းတွင် လူမျိုးရေး ပဋိပ က္ခ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး အတော် များများ သေဆုံးကာ လူဦးရေ နှစ်သိန်းခန့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကုလ သမဂ္ဂသည် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ တကာ လူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့ အစည်း ကြီးများသည် လည်းကောင်း ၀င်ရောက် စွက်ဘက် ပြောဆို ကြခြင်း မရှိပါ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ အချုပ် အခြာ အာဏာ အတွင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ များက ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က လူထု အပေါ် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက် မှုကို ကျူးလွန်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အင်အားစု တရပ်ရပ်က ကျူး လွန်မှုကို အစိုးရက အားပေး ကူညီခြင်း၊ တနည်း နည်းဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့် အရေးချိုး ဖေါက်ကျူး လွန်မှု ကြီးများ ဖြစ်ပွား နေပါလျှက် ကျူးလွန် သူများကို အစိုးရက ထိထိ ရောက်ရောက် အရေးယူ မှုမပြုခြင်း တို့ဖြစ် လျှင်မူ ကုလ သမဂ္ဂ အနေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့ အစည်း ကြီးများ အနေဖြင့် ဖြစ်စေ ၀င်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်း ကြရသည်။ ဤသည်မှာ နိုင်ငံ တကာ လူ့အခွင့် အရေး ဥပဒေ အခြေခံ များပေါ်၌ နိုင်ငံ တကာက ကျင့်သုံးသည့် အစဉ် အလာလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ရခိုင်ပြည် နယ်၌ အလားတူ အခြေ အနေများ ဖြစ်ပွား နေသည့် အထောက် အထား များအား နိုင်ငံ တကာ တွေ့ရှိ သဖြင့်သာ ကုလ သမဂ္ဂ နှင့် နိုင်ငံ တကာက ၀င်ရောက် ပြောဆို လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အရေး ယူ ဆောင်ရွက်မှု များလည်း ရှိလာ နိုင်သည်။
ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် အချို့ ပြောသလို နိုင်ငံ တကာ အနေဖြင့် ရခိုင် တိုင်း ရင်းသား များအား စစ်ဆေး မေးမြန်းမှု နည်းကောင်း နည်းပါမည်။ ဤသည်မှာ အကြောင်း နှစ် ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တချက်မှာ ဦးသိန်း စိန် အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များ သည် ရိုဟင်ဂျာ များနှင့် ပေါင်းကာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များ အပေါ် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက် မှုများ ကျူး လွန် နေကြောင်း သတင်း မရခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်တချက်မှာ ရခိုင် တိုင်းရင်း သားများ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဦးသိန်း စိန် အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များသည် မိမိတို့ အပေါ် လူ့ အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက် မှုများ ကျူးလွန် နေကြသည်၊ ရွာများ မီးရှို့ ၊ လူသတ်၊ မုဒိန်း ကျင့် စသဖြင့် ကျူးလွန် နေပါသည် ဟု တိုင်တန်းခြင်း မပြုခဲ့သော ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ယင်းသို့ ကျူးလွန်မှု သက်သေ အထောက် အထားများ ရှိပါက ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဖြစ်ေ စ၊ ဒေါက် တာ ဒေါ် ရင်ရင်နွယ် အနေဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တကာသို့ တိုင်တန်းမည် ဆိုပါက ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များ အား အဓိက ထား၍ လာရောက် စစ်ဆေး မေးမြန်းရန်မှာ ရာခိုင်နုန်း ပြည့်သေချာသည်။
အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွား ရခြင်း၏ လတ်တလော အကြောင်းရင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်း ရင်းများ ရခိုင် ပြည်နယ် မှ စတင် ခဲ့ပြီး တနိုင်ငံ လုံးသို့ တဖြေးဖြေး ပျံ့နှံ့နေပြီ ဖြစ်သော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ ကြီး၏ လတ်တလော အကြောင်း ရင်းမှာ လူမျိုးရေး ကွဲပြားမှုနှင့် ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက် ခြားနားမှု တို့အပေါ် အခြေခံပြီး တဘက်နှင့် တဘက် အပြန် အလှန် ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲ ကြရာမှ စတင် ပေါ်ပေါက် လာခဲ့သည့် ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံ အရ ပြစ်မှု ကျူး လွန် သူမှန် သမျှကို ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားဘဲ တန်းတူ ထား၍ ပြတ်ပြတ် သားသား ထိထိ ရောက်ရောက် အရေး မယူခဲ့ ခြင်းမှာ ပထမ လတ်တလော အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များကိုယ်တိုင်က ဘက်တဘက်တွင် ရပ်၍ ပြစ်မှု ကြီးများအား ပါဝင် ကျူးလွန် ခဲ့ကြသည် ဟု နိုင်ငံ တကာက ထောက်ပြ စွပ်စွဲ လာသည်က ပို၍ အရေး ကြီးသော ဒုတိယ လတ်တလော အကြောင်း ရင်း ဖြစ်သည်။
ဤလတ်တလော အကြောင်းရင်း နှစ်ရပ် ဖြစ်တည် လာခဲ့ ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်း တို့ လည်း ပေါ်ပေါက် လာပြန်သည်။ ယင်းတို့မှာ ဘာသာရေး အုပ်စုကြီး နှစ်ခုမှ အချို့သော အစွန်း ရောက် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာဝင်များ နှင့် အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ၀ါဒီ များက နည်းလမ်း ပေါင်းစုံ သုံး၍ လှုံ့ဆော် လာခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက် အနေဖြင့် အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ ကြီးများသည် တိုင်းပြည်၏ နေရာ ဒေသ အတော် များများသို့ ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။
လတ်တလော အကြောင်းရင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်း တို့ကို နိုင်းယှဉ် လေ့လာရန် လိုပါမည်။ လတ်တလော အကြောင်း ရင်းသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်း ရင်းသည် သာသာရေး အရ မတူ ကွဲပြားသည့် ဘာသာများ အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ရပ်တည် နိုင်ရေး၊ အပြန် အလှန် လေးစားမှု တည်ဆောက် ရေးတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အရ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ၀ါဒကို စွန့်လွှတ်ပြီး လူမျိုး ပေါင်းစုံ အတူ ယှဉ်တွဲ နေ ထိုင် ရေး အခြေခံ တွင် မိမိ အမျိုးသား အကျိုး စီးပွားကို သမာ သမတ် ကျစွာ ဖေါ်ဆောင် နိုင်ရေး အတွေး အခေါ် စိုက်ထူမှု နှင့် လည်းကောင်း သက်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်း ရင်းများသည် အရေး မကြီး မဟုတ် ကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့ တပြည် လုံးသို့ ပျံ့နှံ့ နေ ပြီ ဖြစ်သော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ ကြီးများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ လူ့အဖွဲ့ အစည်း တခုလုံး နီးပါးသည် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်း ရင်းများ အပေါ် တွင်သာ ကုစား အဖြေရှာ ကြရန် ကြိုးပမ်း နေကြ သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိရောက်မှု အားနည်း နိုင်သည်။
လတ်တလော အကြောင်းရင်း များနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အမှန် တရား ပေါ်အောင် အဓိကထား ဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက် နိုင်မှ သာလျှင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အခြေခံ အားဖြင့် တည်ဆောက် နိုင်ပါမည်။ ထို့နောက် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်း များကို တဖြေးဖြေး အချိန်ယူ ကုစား သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သည့် လတ်တလော အကြောင်း ရင်းကို မီးမောင်း ထိုးကာ အမှန် တရား ပေါ်အောင် ဖေါ်ထုတ် ခဲ့ခြင်း မရှိ။ လတ် တလော အကြောင်းရင်း နှစ်ရပ် အနက် ပထမ တရပ်ကို ကော်မရှင် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ ရသည်။ ထို့ အပြင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ ကိုယ်တိုင်က ဘက်တဘက် နှင့် ပူးပေါင်းကာ ပြစ်မှုကြီး များအား ပါဝင် ကျူး လွန် ခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြ စွပ်စွဲသည့် ဒုတိယ အကြောင်း ရင်းကို လည်း ကော် မရှင်က မျက်စိမှိတ် ပယ်ချခြင်း မှလွဲ၍ အချက် အလက်နှင့် မငြင်းနိုင်။ သို့ရာတွင် အစီရင် ခံစာ၌ လတ် တလော အကြောင်း ရင်းကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြည့်ပြည့် စုံစုံ မဖေါ် ထုတ်ဘဲ နောက်ခံ အကြောင်းရင်း နှင့်နောက် ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်း များကိုသာ ဋီကာ ချဲ့ပြီး ဖေါ်ပြ ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဥပဒေ စိုးမိုး ရေး အခြေခံကို ဖျက်ဆီး ခဲ့သည့် ကာလုံ နှင့် သမတ ဦးသိန်းစိန် ၏ တာဝန် ရှိမှုကို ဖုံးကွယ် သွားစေ ခဲ့ သည်။ ယင်းအတွက် ကော်မရှင် အား ဦးသိန်းစိန်က များစွာ သဘောကျ သွားပုံရ သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့ တွင် တိုင်းပြည်သို့ မိန့်ခွန်း ပြော၍ပင် ချီးမွမ်း ခဲ့သည်။
(ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက်အောင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ လုပ်သလား။ ရခိုင်မှ တရုတ် ပြည်သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ပေါင်းများစွာ ချီကာ တန်ဘိုး ရှိသည့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်း တည်ဆောက် နေပါသည်။ ယင်းအပေါ် ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လူထု များက အားကောင်း ကောင်း နှင့် ကန့်ကွက် နိုင်ခြင်း မရှိစေရန် အာရုံ လွှဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင် သည်ဟု လူထု အတော် များများက ယူဆ လာကြသည်။ ထို့ပြင် တည်ဆောက် ပြီးသည့် အချိန်တွင် လက်ရှိ နှင့် နောင် တက် လာ ဦးမည့် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က နှစ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ဆက်လက် အမြတ်ထုတ် အကျိုး ခံစားနေ ဦးမည့်အပေါ် မကန့်ကွက် နိုင်တော့ စေရေး အတွက် ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လူထု များနှင့် ၄င်းတို့ ၏ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အားနည်းချိနဲ့ သွားစေရန်၊ လုံခြုံရေး အရ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြား လုံခြုံရေး အဖွဲ့ များကိုသာ ထာဝရ အားကိုး သွားစေရန် မဟာ ဗြူဟာ ချမှတ် လုပ်ဆောင် ခြင်း လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အထက်ပါ သုံးသပ်ချက် မမှန်ဟူ၍ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသ်ိန်းစိန် အစိုးရက သက်သေ ပြလိုပါက ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ် သော သတင်း အချက် အလက် မှန်သမျှကို ရှင်းလင်းစွာ တပြည်လုံး သို့ ထုတ်ပြန် ကြေငြာရန် လိုသည်။ ပို၍ အရေးကြီး သည်မှာ အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များကြောင့် ရခိုင် ပြည်နယ် လူထု၏ စီးပွားရေး မှာ ချွတ်ခြုံကျ ပျက်စီး သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည် ကုစား နိုင်ရန် ပိုက်လိုင်း မှရသော ၀င်ငွေ အားလုံးကို ရခိုင် ပြည်နယ် အကျိုး စီးပွား အတွက်သာ သုံးစွဲ သွားနိုင်စေ ရန် ဥပဒေ တရပ် ပြဌာန်း ကာ လွှဲ အပ် ဖေါ်ဆောင် သွားရန် လိုအပ်သည်။
မည်သို့ပင် နောက်ဆက်တွဲ ကုစားမှု များပြုစေဦး၊ ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက် စီး စေ ခဲ့သည့် အတွက် ယင်းမှ စတင်ကာ တပြည်လုံး သို့ပျံ့ နှံ့ စေခဲ့ ရာ၌ တာဝန် ရှိမှု မှနေ၍ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစ်ိန် အစိုးရ သည် ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်။ အဖွဲ့ အစည်း သဘော အရ တာဝန်ရှိမှု နှင့် အမိန့် ပေးခြင်း အရ တာဝန် ရှိမှု ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဂွါတီ မာလာ နိုင်ငံ၌ အာဏာ သိမ်းပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ် ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဖရိန် ရိုင်ယို မွန့်သည် အစ်ဇီးလ် မာယာ အမည်ရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ၀င်ဦးရေ ၁၇၇၁ ဦးအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန် ခဲ့သည် ဟု စွဲချက် တင်ကာ တရားရုံး၌ သက်သေ ပေါင်း တရာ ကျော်ကို စစ်ဆေး ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့ တွင် ၄င်း အပေါ် ထောင် နှစ် ရှစ်ဆယ် ချခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု အတွက် နှစ်ငါးဆယ်၊ လူသား ဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင် သည့် ပြစ်မှု အတွက် နှစ်သုံးဆယ် နှစ်ခုပေါင်း ထောင်နှစ် ရှစ်ဆယ် ဖြစ်သည်။ “သမ္မတ တာဝန် ယူထားစဉ် အတွင်း သတ် ဖြတ်မှု ကြီးများ ကျူးလွန် နေတာကို သိရက်နဲ့ ရပ်ဆိုင်း သွားအောင် ကာကွယ် တားဆီးခြင်း မလုပ်ခဲ့ တာကြောင့် ပြစ်မှု ကျူး လွန်ရာ ရောက်တယ်” ဟု တရားသူကြီး ဂျက်စ်မင် ဘာရီရော့ က စီရင်ချက် တွင်ထည့်သွင်း ဖတ်ကြား သွားခဲ့သည်။
အာဂျင်တီးနား၊ ချီလီ၊ ဂွါတီ မာလာ အစ ရှိသော နိုင်ငံ များတွင် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ဟူသည်ကို အကြောင်း ပြ၍ ပြစ်မှု ကျူးလွန် မှုကြီး များအား မေ့မထားဘဲ ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေး ယူ နေကြ ခြင်းမှာ စစ်မှန်သည့် ဥပဒေ စိုးမိုး ရေး အခြေခံများ တည်ဆောက်ပြီး တိုင်းပြည် တည်ငြိမ် ၊ ငြိမ်းချမ်း ကာ၊ လူထု တရား မျှတမှု ရစေရန် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက် တပ်မတော် နေ့တွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ၄င်း၏ တပ်မတော်သည် မည်သည့် အခါ ကမျှ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု နှင့် စစ်ရာဇ၀တ် မှုများ မကျူးလွန် ခဲ့ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြား သွားခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု နှင့် လူ သား ဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင် သည့် ပြစ်မှု များအား မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းတွင် ဥပဒေ အဖြစ် ပြဌာန်း ထားမှု မရှိသေးပါ။ နိုင်ငံ တကာ ဥပဒေ၏ အစိပ် အပိုင်းများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ချိုးဖေါက် ကျူး လွန် ခြင်းမှာ ပြစ်မှု မြောက်သည် ဟူ၍ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံလိုက် သည့် သဘော ဖြစ်သည်။ ယင်းမိန့်ခွန်း ကိုးကားကာ အာဏာ ပိုင်များက ပြဌာန်း ထားသည့် ပြည်တွင်း ဥပဒေများ အတိုင်း သာ စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law မှနေ၍ နိုင်ငံတကာ စံထား ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး Rule of Law သို့ ပြောင်းလဲ ဖေါ်ဆောင် နိုင်ရေး အတွက် စတင် လှုပ်ရှား လုပ်ဆောင် သင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုကြီး များအား တပ်မတော်က မကျူးလွန် ပါဟူ၍ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် ၏ ငြင်းဆို ချက်ကို မူ လက်ခံနိုင် ဘွယ်မရှိပါ။ ၄င်းပြစ်မှု ကြီးများမှာ မည်သည့် အရာများ ဖြစ်သည်ကို ဥပဒေ သမား များပင် နားလည်အောင် မနည်း ကြိုးပမ်း ကြရသည်။ ယင်းတို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တပ်မတော် အတွင်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ပညာပေး ရေးလုပ်ခဲ့ ကြောင်း လည်း တကြိမ် တခါမျှ မကြား သိခဲ့ရပါ။ သို့ဖြစ်၍ တပ်ဗိုလ်၊ တပ်သား တကယ့် အများစု ကြီးမှာ မည်သည် တို့ကို ကျူးလွန် လျှင် မည် သည့် ပြစ်မှု မြောက်သည် ဟူ၍ နားလည်နိုင် ကြခြင်း မရှိသေး သည်မှာ ရာနုန်း ပြည့်နီးပါး သေ ချာ သည်။ လတ်တလော ဖြစ်ရပ် များကို သုံးသပ် လျှင်ပင် ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း စစ်ရာဇ၀တ်မှု နှင့် လက်ပံတောင်း တောင်ဒေသတွင် ဆန္ဒပြ သံဃာများ အပေါ် လူသား ဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင့် သည့်ပြစ်မှု များ ကျူးလွန် ခဲ့ပြီးပြီဟု နိုင်ငံ တကာ ဥပဒေ အခြေခံမှ သုံးသပ် နိုင်သည်။ အသေး စိပ်ကို ဤစာတမ်း၏ ဒုတိယပိုင်းတွင် ဆက်လက် ဆွေးနွေး ပါမည်။
အထက်ပါ ပြစ်မှုကြီး များနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တာဝန် ရှိမှုကို ရှာဖွေ ရာတွင် အဖွဲ့ အစည်း သဘောအရ တာဝန်ရှိမှု နှင့် အမိန့် ပေးခြင်း အရ တာဝန် ရှိမှု နှစ်ခု တို့၏ ဆက်စပ် မှုနှင့် ကွာခြားမှု တို့ကို လေ့လာဘို့ လိုပါမည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သည် လည်းကောင်း၊ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် သည် လည်းကောင်း တိုင်းပြည်တွင် အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ်သည့် (ကာ/လုံ) ၏ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြ သဖြင့် ယနေ့ တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပွား နေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ ကြီးများနှင့် စပ် လျှဉ်း၍ ၄င်းတို့ တွင် ယေဘု ယျ အားဖြင့် တာဝန် ရှိကြသည်။
ရခိုင် ပဋိပက္ခတွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များအား (ကက/ကြည်း) က တိုက်ရိုက် အမိန့် ပေး ခဲ့ကြောင်း ကော် မရှင်၏ အစီရင် ခံစာအရ ပေါ်လွင် သဖြင့် ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တွင် တာဝန် ရှိသည်။ (ကာ/လုံ) အစည်း အဝေး ခေါ်ပြီး ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ကို တာဝန် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါက (ကာ/လုံ) အဖွဲ့ဝင် အားလုံး တွင် တာဝန် ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဘဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် အား ရခိုင် ပဋိပက္ခများ ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန် ပေးခဲ့ပါက ဦးသိန်းစိန်သည် အကြီးအကဲ  အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် သည် လက်အောက် ငယ်သား  အနေဖြင့် လည်းကောင်း တာဝန်ရှိသည်။
ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း ကေအိုင်အိုကို ထိုးစစ်ကြီး များဆင်နွှဲ ခဲ့စဉ် စစ်ရေး သဘောအရ ကာချုပ် မင်းအောင်လှို်င် မှာ အဓိက တာဝန် ရှိသည်။ စစ်ရာဇ၀တ် မှုများ ကျူးလွန် ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျှဉ်း ၍မူ အကြီး အကဲ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် တွင် တာဝန်ရှိ သလား၊
စစ်မြေပြင် တခုလုံးကို အနီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရသည့် လက်အောက် ငယ်သား မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှုးတွင် တာဝန်ရှိသလား ဟူသည်ကို သုံးသပ် ရပါမည်။ ဤတွင် နိုင်ငံ တကာ ဓလေ့ ထုံးတမ်း ဥပဒေ  အရသာ မက (ရ၀မ်ဒါ နိုင်ငံ တကာ ပြစ်မှုဆိုင် ရာခုံရုံး  က ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဆီအာရာ လီယွန်း အထူး တရား ရုံး  ကပါ လိုက်နာ ကျင့်သုံး ခဲ့ သည့် လက်တွေ့ အရ)
သမား ရိုးကျ နိုင်ငံ တကာ ဥပဒေ  အဖြစ်ပင် လိုက်နာကျင့် သုံးလာ ကြပြီ ဖြစ်သော သတ်မှတ် ပြဌာန်း ချက်အရ အကြီး အကဲ နှင့် လက်အောက် ငယ်သား ဆက်ဆံရေး  အရ တာဝန် ရှိမှု ကို လေ့လာရန် လိုပါသည်။ ဂွါတီ မာလာ နိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဖရိန် ရိုင်ယိုမွန်၏ မှုခင်းနှင့် နိုင်းယှဉ် လေ့လာလျှင် အကျိုးရှိ ပါမည်။
ဥပဒေ အထောက်အကူပြု ကွန်ယက် တည်ထောင်သူ
This entry was posted in Articles, Laws, News. Bookmark the permalink.
← ဂျဟန္နမ် ငရဲ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေးအဖြေ →